Bambada Saliida ugu weyn ee alaab-qeybiyeyaasha iyo warshada | Shidaalka ugu weyn ee Shiinaha ee Soosaarayaasha Baabuurta Pump
Baabuurta Pump A11VLO130LRDU2/11R-NZD12K02P-S Rexroth Main Oil Pump
Bamka Haydarooliga waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Moodeelka A11VLO130 waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo nooca asalka ah ee Rexroth A11VLO130. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida tii asalka ahayd, qiimo badan oo tartan ah, gaarsiinta degdega ah, iyo adeegyada ugu fiican ee iibka kadib.
Bamka Haydarooliga waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Moodeelka A11VO60 ayaa loo isticmaali karaa si loogu beddelo moodalka asalka ah ee Rexroth A11VO60. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida midda asalka ah, qiimo tartan badan, gaarsiin degdeg ah, iyo adeegyada ugu wanaagsan ee iibka ka dib. Awoodda dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto koronto ah oo isku xira isku-darka shubka ah ee xirfadleyda ah (gaadiidka bamka) nidaamka hydraulic kaalmaynta, dayactirka iyo sahayda alaabta.
Gaariga bamka la taaban karo A4VG125/A4VG180 Rexroth main oil
Bamka Haydarooliga waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Moodeelka A4VG125/A4VG180 waxa loo isticmaali karaa in lagu beddelo nooca asalka ah ee Rexroth A4VG125/A4VG180. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida midda asalka ah, qiimo tartan badan, gaarsiin degdeg ah, iyo adeegyada ugu wanaagsan ee iibka ka dib. Awoodda dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto koronto ah oo isku xira isku-darka shubka ah ee xirfadleyda ah (gaadiidka bamka) nidaamka hydraulic kaalmaynta, dayactirka iyo sahayda alaabta.
Bamka Haydarooliga waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Moodeelka A11VLO190 waxaa loo adeegsan karaa in lagu beddelo nooca asalka ah ee Rexroth A11VLO190. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida midda asalka ah, qiimo tartan badan, gaarsiin degdeg ah, iyo adeegyada ugu wanaagsan ee iibka ka dib. Awoodda dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto koronto ah oo isku xira isku-darka shubka ah ee xirfadleyda ah (gaadiidka bamka) nidaamka hydraulic kaalmaynta, dayactirka iyo sahayda alaabta.
Rexroth A11VLO190 Saliida ugu weyn
Bamka Haydarooliga waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Moodeelka A11VLO190 waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo nooca Eaton A11VLO190. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida midda asalka ah, qiimo tartan badan, gaarsiin degdeg ah, iyo adeegyada ugu wanaagsan ee iibka ka dib. Awoodda dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto koronto ah oo isku xira isku-darka shubka ah ee xirfadleyda ah (gaadiidka bamka) nidaamka hydraulic kaalmaynta, dayactirka iyo sahayda alaabta.
Bamka Haydarooliga waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Moodeelka A11VO40 ayaa loo isticmaali karaa si loogu beddelo nooca Eaton A11VO40. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida tii asalka ahayd, qiimo badan oo tartan ah, gaarsiinta degdega ah, iyo adeegyada ugu fiican ee iibka kadib. Korontada dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto oo isku xidha isku-darka shubka ah ee xirfadlaha ah (gaadiidka bamka) nidaamka hawo-mareenada taageeridda, dayactirka iyo agabka agabka.